Uyilo lwegraphic flat okanye uyilo olucwangcisiweyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo lwegraphic olucaba o Uyilo olucwangcisiweyo Yasungulwa kwilizwe loyilo lwegraphic kunye newebhu kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye kubonakala ngathi yahlala ixesha elide kwaye ayisiyiyo kwaphela ifashoni okanye indlela edlulayo, kodwa yimpendulo kwimfuno yokusebenza ifuna ukuziqhelanisa noyilo oluphendulayo.
Into eluncedo kuyo ngokwenene, nokuba iyasetyenziswa kwizixhobo ezikhulu okanye kwizikrini ezincinci zeselfowuni, inokusetyenziswa njengesixhobo kwi UX Design, Ingaba ithetha ntoni "Uyilo lwamava omsebenzisi", Ukubonelela abasebenzisi ngamava angcono ngokubavumela ukuba basebenzise ngokugqibeleleyo.
1 Imvelaphi yoyilo olusicaba
2 Uyilo olucwangcisiweyo
3 I-typography ibaluleke kakhulu kuyilo olucwangcisiweyo
4 Umahluko, uyilo olude lweShadow
Imvelaphi yoyilo olusicaba
YiMicrosoft, ecaleni konxibelelwano lwayo Isixhobo somdlali we-zune mp3, oqale ukubeka iziseko zolu hlobo ngo-2006 emva koko ngo-2010 ngokusungulwa kwe Ifowuni yeWindows 7. Emva koko iphehlelela inkqubo yeWindows 8, esebenzisa iMetro, ujongano lomsebenzisi yaqala yenziwa yiMicrosoft ukuba zisetyenziswe kwiifayile zabo.
Sula izikrini zeapp, iikona ezibukhali, ukusetyenziswa kwegridi, iithowuni eziqaqambileyo, ucoceko kunye nokuchwetheza okulula, njl.Ngokuqinisekileyo kwiDijithali”NguMicrosoft.
Ubuncinci yinto "engaqhelekanga", inyani yokuba ngeli xesha ayisiyi-Apple kodwa nguMicrosoft umbhali wentuthuko kuyilo. Ithathe iApple ixesha elincinci ukugqiba ukuphuma kuyo imo eyiyo, ebizwa ngokuba yi "eskeumorphism" evumela ujongano lwedijithali ukuba lubonakale njengezinto zokwenyani, kodwa kwakungekho ngo-2013, kunye nokuqaliswa kwe-iOS 7, apho yaqala ukuyongeza khona.
Uyilo olucwangcisiweyo luvumela ukususwa kwe Uncedo, umahluko, uburhabaxa, izihombiso, ukufiphala, iigradients kwaye nasiphi na isiphumo esintlu-ntathu kukuba uyilo lwegraphic njengangoku luvela lucoceke ngakumbi, lubalasele ngakumbi, lubukhali, ngaphandle kobunzulu kunye nemiphetho eqinileyo ethe kratya.
Ukongeza, iimilo ezinazo zijiyometri ngokupheleleyo.
Ngokukwanjalo, ilungelelaniswe ngokupheleleyo kwifayile ye- izikrini ezincinci zokuchukumisa izixhobo zeselfowuni ezinazo kunye nokusetyenziswa kwendawo engenanto kuvela ukuba kubaluleke kakhulu, kuba ukucofa imouse akufani nokuchofoza ngomnwe wakho, yiyo loo nto ubukhulu besayizi yefonti yokuchwetheza kunye nee icon zinkulu. Le mibala yokuqala kunye neyesibini; okuqaqambe ukongeza ekuzuzeni umahluko, yenza ikakhulu ngemvelaphi emnyama kunye nemifanekiso, ukongeza Kwandisa ukubonakala xa usebenzisa ukukhanya kwemini kwendalo.
Ngokunjalo, kusetyenziswa i-pastel kunye neendawo ezincinci kakhulu zemibala, kuthathelwa ingqalelo imeko ye-retro, apho kusetyenziswa iithowuni ezityheli, eziluhlaza, njl. Kwaye ukusebenzisa umbala omnye kuphela, oku kumnyama okanye kumhlophe Ukulungiselela ukucacisa izinto ezahlukeneyo. Sebenzisa umbala sisixhobo esisebenza njengesikhokelo kubasebenzisi ukuhambisa ulwazi.
I-typography ibaluleke kakhulu kuyilo olucwangcisiweyo
Inkqubo ye- I-sans-serif typefaces, Yobunzima obuncinci, ilula kwaye inemizimba emikhulu. Imiyalezo ngokubanzi imfutshane, icacile kwaye ngaphezu kwako konke, iya ngqo, isebenzisa kuphela amagama afunekayo ukuze aqondakale.
Umahluko, uyilo olude lweShadow
Uyilo olude lweShadow, luqulathe Umkhwa welogo okanye uyilo lwe icon ezelwe kuyilo olucwangcisiweyo, oluvumela ukongeza isithunzi eside, ngokuchasene ngokupheleleyo nezithunzi ezisetyenziswe kuyilo lokwenyani. Umahluko ovumela yongeza ubunzulu ngaphandle kokuphulukana nomxholo woyilo olucwangcisiweyo, kwaye ikwavumela ukuba kube lula ukolula isithunzi ujikeleze iidigri ezingama-45 ukuya emaphethelweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo lweplati okanye uyilo olucwangcisiweyo
UJose Ladron de Guevara sitsho
Okwangoku ndifuna ukuphonononga kwiscreen into endiyenzileyo iminyaka ephepheni kwaye eli nqaku belikukusetyenziswa kwam ngokupheleleyo, uyilo olucabaleleyo, olunamandla!
Indawo yam ekumgangatho ophezulu wesiko ekumgangatho ophezulu: http://galeriadelretrato.com/
YONYAKA WOKWENZA I-CREATIVOS ONLINE GUYS!
Phendula kuJose Ladron de Guevara
Iminyaka engama-25 yoyilo lwegraphic kunye neFotohop